Maitiro ekuona iyo Tokyo 2020 Olimpiki Mitambo inorarama mahara | Ndinobva mac
Maitiro ekuona iyo Tokyo 2020 Olimpiki Mitambo inorarama mahara
Pane zvishoma zvishoma zvasara kusvikira Mitambo yeOlimpiki ya2020 yatanga. Kana mutorwa akawira pasi redu nhasi uye iwe ukaverenga musoro wenyaya iyi, uchafunga kuti takakanganisa pakunyora gore. Asi isu tese takamborarama uye tikatambura nemufaro COVID-19 denda tinoziva kuti haisi mhosho.
Mitambo yeOlympics Tokyo 2020 ivo vaifanirwa kumiswa nekuda kwechirwere checoronona, ndokumbomiswa kwegore. Gore rimwe kushoma zuva rimwe, kuti zvive chaizvo. Zuva rekuvhura rakarongerwa Chikunguru 24, 2020, uye kumagumo ichave Chikunguru 23, 2021. Pasina kupokana, chimwe chezviitiko zvakakura zveterevhizheni papasi izvo zvatinogona kutevera paTV pasina kurasikirwa nechero ruzivo Ngatione kuti tingazviona sei zvizere vakasununguka.
🥇 Edza mwedzi wakasununguka: Usapotsa chero chinhu chemitambo yeOlympic uye nemiedzo yese clicking here. Uchakwanisa kuona ese maOlympic mitambo uye mimwe mitambo chete (F1, basketball, nhabvu…) pasina chero rudzi rwekuzvipira.
Sezvo maOlimpiki e2016 muRio de Janeiro apera, zvaizivikanwa kuti zvinotevera zvichatanga muna Chikunguru 24, 2020 muTokyo. Chokwadi hapana aigona kufunga kumashure kuti izvi zvaisazove zvakadaro. Mukutanga 2020, iyo coronavirus pasi rese, kutapura nekuuraya mazana ezviuru zvevanhu munyika dzese pasina kusarudzika. Tatarisana nemamiriro ezvinhu akadaro, pasi rese rakavharirwa padanho hombe kana shoma, kuitira kudzikisa huwandu hwehutachiona.
Uye ndiwo marariro maviri akakosha emitambo munyika, senge Nhabvu Eurocup 2020 and the Tokyo 2020 Olimpiki, vakamiswa basa ndokumbomiswa kwegore. Mutungamiri wedare rinoronga Yoshiro Mori akazivisa izvi: "Zita reTokyo 2020 richachengetedzwa, uye richaitwa muna 2021."
1 Maitiro ekuona maOlimpiki emahara paTV
2 Zvinoita sei, kana DAZN ikabhadharwa?
3 Uye maitiro ekuona maOlimpiki achibhadhara
4 Mapuratifomu pane edu zvishandiso
5 Olimpiki isina vateereri mumasitendi
6 Chikwata cheSpanish cheOlympic
Maitiro ekuona maOlimpiki emahara paTV
Vaviri mu RTVE sezvazviri DAZN Unogona kutarisa maOlimpiki e2020 emahara online. Hongu, hongu, DAZN inzvimbo yekubhadhara, asi ikozvino gare gare tichakuudza kuti sei nakidzwa nechiitiko cheolimpiki usingabhadhari yuro imwe chete kubva padandemutande remitambo rinotenderera.
Panyaya yeRTVE, nyaya iri pachena. Ndiyo Spanish yeruzhinji terevhizheni, iyo inobhadharwa nemitero yevaSpanish vese, uye ichatepfenyura makwikwi ese eTokyo 2020 Olympic Games pachena, zvese paterevhizheni uye mukushambadzira. Uye zvakare, iwe unenge uine ese makwikwi atoitwa kare papuratifomu yako kuti vagone kutariswa mumashure. Iyo cheni iri kuzopidiguka pasina kupokana neMitambo yeOlympic.
Iwe unenge uine nzira dzinoverengeka dzekugona kutevera maOlimpiki nesangano reruzhinji reRTVE. Unogona kuzviita kuburikidza La1, Telesport, yayo yekutenderera yevhidhiyo chikuva, ayo masocial network kana chayo chepamutemo chiteshi che Youtube, kuwedzera pakuteerera kutepfenyuro kubva RNE.
Uye imwe sarudzo inonakidza kwazvo ndeyekuiona kuburikidza neyakajairika nzira yeOlympics Eurosport 1 y Eurosport 2 iyo inosanganisira iyo yekutenderera yevhidhiyo chikuva DAZN. Pane ino chikuva iwe unogona zvakare kutevera maOlimpiki paDAZN kubva pakuvhurwa kwayo kusvika pakuvharwa kwayo, chose vakasununguka. Uye pasina kubiridzira kana kadhibhodhi.
Zvinoita sei, kana DAZN ikabhadharwa?
Iwe unogona kutevera ese maOlympic Mitambo pane DAZN's Eurosport chiteshi.
Iyo DAZN yemitambo chikuva inopa vese vayo vatsva kunyorera a 30-mazuva emahara ekuyedza nguva. Mushure menguva iyi yekuyedzwa, mutengi anosarudza kuti aenderere mberi kana kuti haana kunyoreswa, pasina chisungo, pasina chirango uye pasina kunetsekana kana uchinyoresa. Sezvo maOlimpiki achangopfuura kwevhiki mbiri, ini handidi kutsanangura chero chimwe chinhu kwauri.
Izvo zvinofanirwawo kutarisirwa, kuti zvichienderana nesarudzo yekubhadhara yaunosarudza, iyo nguva yemahara inogona kuwedzerwa kusvika mwedzi mitatu.
Ngatione. Kunyorera ku DAZN kunotakura muripo wemwedzi we 9,99 euros, kana kubhadhara kwegore 99,99 euros (iwe unobhadhara mwedzi gumi). Iine zvese zviri zviviri pamwedzi uye pagore sarudzo, DAZN inopa Mazuva makumi matatu kuyedzwa kwemahara. Nekudaro, kana isu tikasarudza mubhadharo wegore rimwe chete, kumwedzi iwo wepachena, iwo maviri aunochengetedza pamwe nechipo chegore chaizowedzerwa. Ndokunge, iwe waigona kunakidzwa nemwedzi gumi nematanhatu asi iwe waizobhadhara gumi chete, kuti iwe ugone kuona maOlympic Mitambo, maParalympics uye, pakati pevamwe, kutanga kwePremier League kana iyo Euroleague. Tora izvozvi.
Pamusoro peOlympics, aya magero maviri, akaverengerwa mukunyoreswa kweDAZN, anounganidza makwikwi epamusoro soro senge Roland Garros (Tennis), iyo Dakar Rally (Motorsports), iyo Fomura E (Mudhudhudhu) kana iyo Nhandare Yenyika (Snooker). Mukupedzisira, iyo Tokyo 2020 Olimpiki Mitambo inopfuura anopfuura mazuva gumi neshanu chete, saka iro rinosara regore rinotorwa nedzimwe nhanho dzemitambo yepamusoro.
🥇 Edza mwedzi wakasununguka DAZN uye usarasikirwa nechinhu kubva kuma2021 Tokyo Olimpiki
Uye maitiro ekuona maOlimpiki achibhadhara
Eurosport Player ndiyo yekubhadhara chikuva kwaunogona kutevera iyo Olimpiki Mitambo.
Imwe nzira yekutevera maOlimpiki paTV iri mu Mutambi weEurosport. Iyo Eurosport yekuparadzira chikuva inotepfenyura iyo Tokyo 2020 Olimpiki Mitambo pamhepo, rarama uye zvakare pane zvinodiwa, kuti iwe ugone kuzvitarisa pazvinodiwa.
Kufanana nemapuratifomu akakura ekushambadzira, Eurosport Player inokupa zvirimo muHD, inokutendera kuti uione pane akasiyana madhijitari uye ine sarudzo yakawanda-kamera kuitira kuti usarase ruzivo rweTokyo 2020 Olimpiki.
Asi zvechokwadi, iyi yese yekutarisa mhando inouya nemutengo. Eurosport Player ine mubhadharo pamwedzi 6,99 euros, kana kubhadhara kwegore 39,99 euros. Iyo yeEurosport Player kunyoreswa kunozoitwa patsva asi hapana kuzvipira kwekugara kana chirango chekuzvinyora.
Uye zvechokwadi, iwe unogona zvakare kutevera iyo Tokyo Olimpiki Mitambo mune zvakadzama kana iwe uri kunyorera kune Movistar, Orenji y Vodafone. Kana iwe ukabatira fiber, nhare, terevhizheni uye yakatarwa chiyero, pamwe nechero wevashandi vakuru, iwe unenge watove nematanho akakosha ekuona iyo Tokyo 2020 Olimpiki Mitambo nekukasira.
Paunenge uchihaya chero yeiyo Fusion Mitengo yeMovistar, iwe unenge wave wakasanganisira iwo makumi matatu thematic chiteshi cheMovistar TV. Pakati pavo, unogona kunakidzwa neEurosport 80 (Dial 1) uye Eurosport 61 (Dial 2), nekudaro uchikwanisa kuona iyo Tokyo 62 Olimpiki zvizere.
Panyaya yeOrange, zvese zviyero zvinosanganisira sarudzo Orange TV Yese, ivo zvakare vakasanganisira iwo mageru Eurosport 1 (Dial 100) uye Eurosport 102 (Dial 101).
Kune rimwe divi, muVodafone, kana iwe uchihaya chero yayo fiber, nhare, yakatarwa uye terevhizheni mitengo, iwe unotova neiyo Eurosport 1 chiteshi iyo inokutendera iwe kuti uone makwikwi makuru eTokyo 2020 Olimpiki., Yakanyanya sarudzo ndeye hire iyo Mutambo wePaki kubva kuVodafone, iyo inosanganisira Eurosport 2 uye Eurosport Player, iyo Eurosport yakambokurukurwa nezvayo yekushambadzira chikuva.
Mapuratifomu pane edu zvishandiso
Tevera maOlimpiki. pane DAZN kubva kune yako iPhone, iPad, Mac kana Apple TV.
Zviripachena, ese aya anotenderera evhidhiyo mapuratifomu ane ayo anoenderana kunyorera zvese zve M1 Macs, iPads, iPhones y Apple TV. Saka iwe unogona kuteedzera ese mitambo kubva chero kupi. Hauna pembedzo.
DAZN ane rake kushandiswa yeIOS, iPadOS, Mac M1 uye Apple TV. RTVE zvakare ine yayo App RTVE Tamba inoenderana ne iPhone, iPad, Mac M1 uye Apple TV. Eurosport Player, ine yayo App ye iPhone, iPad uye Apple TV. Movistar, Orange uye Vodafone zvakare vane avo mashandisirwo eese ari maviri iPhone, iPad uye Apple TV.
Olimpiki isina vateereri mumasitendi
Asi pakasarudzwa kumisa zviitiko zviviri zvemitambo zvikuru, tariro yaive yekuti nanhasi hutachiona hwanga hwatove pasi pehutongi. Asi hazvina kunge zvakadaro. Kunyangwe kuve nechakakosha chikamu chevagari vakatobayiwa, kutaridzika kwemusiyano Delta COVID-19 iri kukanganisa mhirizhonga pakati pevechidiki huwandu, ichiri isina kubayiwa, uye mutsva wehutachiona waonekwa.
Saka vachiri munhandare umo iyo Euro 2021 Isu takaona mafeni mumasitendi (aine ganhuriro yekugona zvichienderana nenzvimbo), pakupedzisira vakuru vehutano veJapan vakaraira pamusoro pekuvhura nhandare uye dzimba dzemitambo kuruzhinji, neMitambo yeOlympic mu Tokyo 2021 Ivo vanozovharirwa kuseri kwemasuo akavharwa, pasina veruzhinji mumasitendi.
Sarudzo yekubata makwikwi pa gonhi rakavharwa Zvakagadziriswa mushure memusangano wemapato mashanu wakapindwa nemutungamiriri weInternational Olimpiki Committee, Thomas Bach, nevamiriri vedare rinoronga reTokyo 2020, International Paralympic Committee nemaguta makuru eJapan neTokyo.
Nekudaro, iyo Mitambo yeOlympic inotanga 23 yeJuly, nemhemberero yekuvhura nekugadzwa muguta reTokyo, uye inopera muna Nyamavhuvhu 8, mavhiki maviri mushure mepfuti yekutanga muchiitiko chakatarwa neanofara coronavirus uye kusavapo kweruzhinji, asi iyo ichave yakakosha nhume dzeSpanish dzine tarisiro kukunda akawanda akanaka menduru.
Chikwata cheSpanish cheOlympic
Saúl Craviotto naMireia Belmonte ndivo vachange vari vatakuri vevamiriri veSpanish muTokyo 2020.
Spain ichave nayo 321 vatambi paOlympic yeTokyo. Spanish Olimpiki Committee yakaburitsa svondo rino runyorwa rwevamiriri vechikwata cheSpanish chichaedza kuwana mhedzisiro yakanaka kwazvo mutafura yemenduru. 184 varume y 137 vakadzi Vachakwikwidza mukati memavhiki maviri echiitiko cheOlympic, naSaul Craviotto naMireia Belmonte sevatungamiriri vechikwata ichi sevatakuri vemureza veSpanish.
Pakati pemazita akakodzera anomira pachinyorwa pane mutambi wemamirioni 110 zvipingamupinyi Orlando ortega, golfer Jon Rahm, mutyairi webhasikoro Alejandro valverde kana vatatu vatatu Javier Gomez Noya y mario cool, kuwedzera kune zvake Saul Craviotto, mutungamiri weK4 500 aine sarudzo dzemenduru muTokyo. Pamusoro pezvo, nhabvu yevanhurume, basketball, handball uye zvikwata zvepombi yemvura zvine sarudzo dzekuwana menduru yeOlympic kuSpain.
Mumakwikwi evakadzi, Mireia Belmonte ndicho chikuru chinoonekwa kumeso kwechikwata cheSpanish, nekarateka Sandra Sanchez kana bhero Lydia valentin sedzakakomba sarudzo dzekuwana menduru. Muzvikwata, vasikana vebhora remaoko, basketball kana polo yemvura vari zvekare pakati pevachakwikwidza kusungirira simbi muMitambo yeOlympic iyi.
Kana iwe uchida kutevera kutepfenyurwa kweTokyo 2020 Mitambo yeOlympic inotanga muna Chikunguru 23 paTV, akanakisa emahara sarudzo ari RTVE uye maviri maEurosport chiteshi ayo aanokupa DAZN papuratifomu yako uye kuti iwe unogona kuedza zvachose mahara.
Uye sarudzo dzekubhadhara ndiyo chiteshi chikuva Mutambi weEurosport, uye kuzivana kwevashandi veSpanish Movistar, Vodafone y Orenji. Ehe, iwe une sarudzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Maitiro ekuona iyo Tokyo 2020 Olimpiki Mitambo inorarama mahara
Mavara matsva eAirTags tambo dzematehwe uye keyrings
MagSafe bhatiri re iPhone 12 ikozvino riri kutengeswa